कोरोना बीमा बन्दः सरकारले रकम निकासी नगर्दा दाबी भुक्तानी अझै अन्योलमा - Arthasansar
सोमबार, ०४ साउन २०७८, ०७ : ०४ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा कोभिड–१९ बीमालेख बन्द गरिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै गत साउन १ गतेदेखि कोरोना बीमाको कारोबार बन्द गरिएको हो ।
कोरोना बीमा बीमाक्षेत्रको दायित्व जम्मा दायित्व रू. ३ अर्ब ५० करोड रहेको छ । यसमा बीमा समितिले रू. १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरेर त्यो बराबरको भुक्तानी बीमाक्षेत्रबाट नै हुने व्यवस्था छ । तर, बीमा क्षेत्र त्यो बराबर मात्र नभएर थप रू। १ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पनि दिइसकेका छन् ।
कोरोना बीमामा कुल कति दाबी पर्यो भनेर तथ्यांक तयार भइसकेको छैन । असार मसान्तसम्म रू. ११ अर्बभन्दा बढी दाबी परेको बीमा कम्पनीहरूको अनुमान छ ।